ချစ်​မူ့​ရေးရာ Archives - Lodarya
“ဘာမှ မရှိချိန်မှာတောင် လက်တွဲမဖြုတ်တာကို မေတ္တာစစ်လို့ခေါ်တယ်”
ဘာမှ မရှိချိန်မှာတောင် လက်တွဲမဖြုတ်တာကို မေတ္တာစစ်လို့ခေါ်တယ် ကိုယ့်ဘက်ထက် သူ့ဘက်ကို ပိုတွေးပေးတာကို ဖေးမမှုလို့ခေါ်တယ် ပြဿနာတွေတက်တိုင်း အလျှော့ပေးတတ်တာကို သည်းခံမှုလို့ ခေါ်ပြီး အမှားလုပ်မိလို့ တေးမှတ်မထားတာကို သဘောထားကြီးတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ မေတ္တာစစ်တယ် သည်းခံတတ်တယ် ဖေးမတတ်ပြီး သဘောထားကြီးတယ် ဆိုတာတွေက ယောက်ျားလေးဖြစ်ခြင်း မိန်းကလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး တစ်ဖက်လူအပေါ် […]
ထိပ်ပြောင်တဲ့ကိုကြီးတွေကို ချစ်သူအဖြစ်ရွေးသင့်တဲ့အကြောင်းရင်း ( ၆ ) ချက်…!
ထိပ်ပြောင်တယ်ဆိုတာ နဖူးပြောင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘေးဘက်တွေမှာ ဆံပင်ရှိပြီး ထိပ်မှာပဲကွက်ပြီး ပြောင်နေသူတွေကိုပြောတာပါ။ယောက်ျားလေးတွေက ထိပ်ပြောင်မှာကိုအလွန်ကြောက်ကြပါတယ်။အချို့တွေဆို ဆံပင်ပေါက်ဆေးတွေလူးတာ၊စားတာတွေတောင်လုပ်ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာစစ်တမ်းကောက်ယူချက်တွေအရ ထိပ်ပြောင်တဲ့သူတွေကို မိန်းကလေးတွေကပိုပြီးချစ်သူတော်ချင်ကြပါတယ်တဲ့။ ထိပ်ပြောင်တဲ့သူတွေမှာသူများတွေထက်ပိုတော်တဲ့အားသာချက်တွေရှိတာကြောင့်ပါ။ ပြောချင်လွန်းလို့ပရိသတ်ကြီးအတွက် ထိပ်ပြောင်တဲ့သူတွေကိုချစ်သူတော်သင့်တဲ့အကြောင်းအရင်း(၆) ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ထိပ်ပြောင်တဲ့ကိုကြီးတွေက တအားချောတယ် မိန်းကလေးတွေလိုပဲပေါ့။ ဆံပင်ဆိုတာ ယောက်ျားလေးတွေအတွက်လည်းဒုတိယမျက်နှာပါ။ အချို့လူတွေက လူကသိပ်မချောပေမယ့်လည်း ဆံပင်ပုံစံလေးကယ်နေလို့ ကြည့်ပျော်ရှု့ပျော်ဖြစ်ပြီးဆော်ကြည်နေတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ထိပ်ပြောင်နေရက်သားနဲ့ကိုမှ […]
ခင်ပွန်းဖြစ်ပြီး ~~~ ခင်ပွန်းတာဝန်မကျေရင်ဇနီးမယားကလင်ရှိမုဆိုးမပဲ။ဇနီးဖြစ်ပြီး ~~~ ဇနီးဝတ္တရားပျက်ကွက်ရင်ခင်ပွန်းဖြစ်သူကမယားရှိမုဆိုးဖိုပဲ…!
”’ တာဝန် ”’ ခင်ပွန်းဖြစ်ပြီး ~~~ ခင်ပွန်းတာဝန်မကျေရင် ဇနီးမယားကလင်ရှိမုဆိုးမပဲ။ ဇနီးဖြစ်ပြီး ~~~ ဇနီးဝတ္တရားပျက်ကွက်ရင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူကမယားရှိမုဆိုးဖိုပဲ။ မိဘဖြစ်ပြီး ~~~ မိဘတာဝန်မကျေရင် သားသမီးကမိဘမဲ့ပဲ။ သားသမီးဖြစ်ပြီး ~~~ သားသမီးတာဝန်မကျေရင် မိဘတွေကလူအိုရုံကအထီးကျန်လူသားတွေပဲ။ ချစ်သူဖြစ်ပြီး~~~ချစ်သူ့ ဝတ္တရားပျက်ကွက်ရင် တစ်ဘက်ကတစ်ချိန်စွန့် ပစ်ခဲ့မှာပဲ။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး ~~~ […]
March 13, 2019 Lodar Ya 0
1) ပိုင်ရှင်ရှိ ယောက်ျား ၊ သက်ဆိုင်သူရှိတဲ့ ယောက်ျားများအား ကြာခိုခြင်း ၊ ကြောင်တောင် နှိုက်ခြင်း ။ 2) မိန်းကလေးချင်း ခင်မင် ရင်းနှီးရက်သားနဲ့ ( သို့ ) ရင်းနှီးအောင် လုပ်ပြီး ထိုမိန်းကလေး၏ ချစ်သူ / လင်ယောက်ျားအား စနှိုက်ကျော် […]
March 12, 2019 Lodar Ya 0
1) စာတတ်တဲ့ယောက်ျားထက် စာနာစိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားကိုသာရွေးချယ်ပါ တစ်မိုးအောက်ထဲ အတူနေထိုင်မဲ့သူဆိုတာကိုယ့်ခံစားချက်ကို စာနာစိတ်နဲ့ ကြည့်မြင်တတ်သူ ဖြစ်နေဖို့ သိပ်လိုအပ်တယ် ။ 2) ပညာတတ်သူထက် ကြင်နာစိတ်ရှိသူကိုသာရွေးချယ်ပါ ကိုယ့်ဘဝတစ်သက်တာလုံးအနီးဆုံးမှာရှိနေမဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကြင်နာတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ ဖေးမနိုင်သူဖြစ်ဖို့သိပ်လိုအပ်ပါတယ် ။ 3) ငွေချမ်းသာသူထက် စိတ်ထားရိုးဖြောင့်သူကိုသာရွေးချယ်ပါ ။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အေးအတူပူအမျှ လက်တွဲထားရမဲ့သူဟာ […]
“မယား ( ၇ ) မျိ်ုး ၊ လင် ( ၈ ) မျိုး”
March 11, 2019 Lodar Ya 0
မယားခုနှစ်မျိုး ၊ ရှိမြဲရိုးတွင် ၊ ခိုးသူအရှင် ၊သူသတ်သွင်းသို့ ၊ အကြင်မယား ၊ လား၏ငရဲ ၊အမြဲမှတ်ဘိ ၊ အမိတမျှ ၊ နှမမယွန်း ၊ခင်ပွန်းသဖွယ် ၊ ကျွန်နှယ်လေးဖြာ ၊ မယားမှာကား ၊နိပ္မာနတ်ပြည် ၊ လာမြဲမည်၏ ၊ယင်းသည့်လေးသွယ် ၊ […]
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူကို စိတ်ဆိုးနေပေမယ့် သူ့ကိုကိုယ် ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်ကြောင်း ပြနိုင်မည့် နည်း ( ၆ ) နည်း
လူတစ်ယောက်ကို စိတ်ဆိုးတာနဲ့ သူ့ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပြောင်းလဲဆက်ဆံစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုပေါ့။ ကိုယ့် အရမ်းကို ချစ်ရတဲ့ချစ်သူ၊ ဒါမှမဟုတ် ကလေး၊ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဥိး၊ သူငယ်ချင်း စတဲ့သူတွေက ကိုယ့်ကို စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လိုက်လို့ စိတ်ဆိုးနေပေမယ့် ဒါဟာ သူတို့ကို မုန်းတာမျိုး မဟုတ်ပဲ သူတို့ကို အရင်လို […]
မိန်းမ တစ်ယောက်ကို ချစ်မိသွားရင် ပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ ကွီးတို့ အိုက်တင်များ
သင်ဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ယောက်ကျားလေးသူငယ်ချင်းတွေထဲက တစ်ယောက်က သင့်ကို အမြဲတမ်း နည်းလမ်းပေါင်းစုံနှင့် ထူးခြားမှု့လေးတွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုပါစို့။ ဘာလို့များ သူဘာလို့ ဒီလိုများလုပ်နေရတာလည်း။အဲ့ဒီအရာရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိနေမလည်းဆိုပြီး မေးခွန်းတွေ ထုတ်ဖူးကြတယ်မဟုတ်လား။ဘာလို့လည်း၊ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့အဘိဓာတ်ထဲမှ လုံးဝပြီးဆုံးမှာမဟုတ်တဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ အတွက် ဖော်ပြပေးမယ့်အပြင် သင့်ကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတာကို ပါးစပ်ကနေ […]